Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Camaliyad Istish-haadi Ah Oo Ka Dhacday Magaalada Muqdisho.
Dagaalyahan ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ayaa weerar loo adeegsaday camaliyad Istish-haadi ah la beegsaday maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Jugta camaliyadda oo si wayn looga maqlay qaybo ka mida xaafadaha magaalada Muqdisho waxay si gaar ah kaga dhacday agagaarka xero Nacnac degmada Wadajir ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Camaliyaddan nafhurnimo oo uu fuliyay geesi ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta Mujaahidiinta ayaa beegsatay goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halkaas oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka kooxda Farmaajo.
Ilo xog-ogaal ah waxay wariyeen in khasaaraha horu dhaca ah ee ka dhashay camaliyadda uu gaarayo dhimashada 11 askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka dowladda halka 16 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa.
Camaliyaddan waxay qayb ka tahay camaliyaad dhowr ah oo bilooyinkii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu beegsaday xubno ka tirsanaa sirdoonka dowaldda iyo saraakiil dowladeed kuwaas oo ka dhacay magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.